Ma W’ani Nnye Sɛ Woanya Hokwan ne Yehowa Reyɛ Adwuma! | Adesua
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | October 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zande Zulu
Ma W’ani Nnye Sɛ Woanya Hokwan ne Yehowa Reyɛ Adwuma!
“Yɛyɛ Onyankopɔn mfɛfo adwumayɛfo.”—1 KORINTOFO 3:9.
Ɛfi tete nyinaa hokwan bɛn na Yehowa de adom n’asomfo?
Adwuma bɛn na ɛsɛ sɛ yɛn ani ku ho nnɛ?
Dɛn na yɛhwɛ kwan sɛ yɛn nsa bɛka daakye?
1. Sɛn na Yehowa bu adwuma, na dɛn na wayɛ?
YEHOWA yɛ odwumayɛni a n’ani gye n’adwuma ho. (Dwom 135:6; Yohane 5:17) Ɔpɛ sɛ abɔfo ne nnipa nso ani gye wɔn adwuma ho, enti wama wɔn adwuma a ɛbɛma wɔanya anigye ne akomatɔyam. Yehowa rebɔ ade no, ɔmaa n’abakan yɛɛ adwuma no bi. (Monkenkan Kolosefo 1:15, 16.) Bible ka sɛ ansa na Yesu reba asase so no, na ɔwɔ Onyankopɔn nkyɛn wɔ soro “sɛ odwumayɛni a ne ho akokwaw.”—Mmebusɛm 8:30.
2. Yɛyɛ dɛn hu sɛ Yehowa de abɔfo di dwuma bere nyinaa?
2 Sɛ wokan Bible fi Genesis kɔsi Adiyisɛm a, wohu sɛ ɛfi tete nyinaa Yehowa ma abɔfo yɛ nnwuma ahorow. Bere a Adam ne Hawa yɛɛ bɔne a Onyankopɔn pamoo wɔn fii Paradise hɔ no, ɔde adwuma bi hyɛɛ abɔfo nsa. Genesis nhoma no ma yɛhu sɛ Onyankopɔn de “kerubim ne ogya nkrante a ɛretwa ne ho kɔwɛn ɔkwan a ɛkɔ nkwa dua no ho no ano wɔ Eden turo no apuei fam.” (Genesis 3:24) Bio nso Adiyisɛm nhoma no ma yɛhu sɛ Yehowa “somaa ne bɔfo bɛkaa nneɛma a ɛtwa sɛ ɛba ntɛm kyerɛɛ ne nkoa,” kyerɛ sɛ, ɔbɛkaa nea ɛbɛsi daakye.—Adiyisɛm 22:6.
NNIPA NSO Ɛ?
3. Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔkwan bɛn so na ɔsuasuaa n’Agya?
3 Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔde anigye yɛɛ adwuma a Yehowa de maa no no. Yesu suasuaa n’Agya na ɔde nnwuma ahorow bi hyɛɛ n’asuafo no nsa. Ɔma wɔhuu sɛ adwuma a ɛhyɛ wɔn nsa no nyɛ adwumawa. Ɔkae sɛ: “Nokware, nokware, mise mo sɛ, nea onya me mu gyidi no, ɔno nso bɛyɛ nnwuma a meyɛ no bi; na ɔbɛyɛ nnwuma akɛse asen eyinom, efisɛ merekɔ Agya no nkyɛn.” (Yohane 14:12) Yesu boaa n’asuafo no ma wɔhuu sɛ adwuma no ho hia paa. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adekyee wɔ hɔ yi, ɛsɛ sɛ yɛyɛ nea ɔsomaa me no nnwuma; anadwo reba a obiara rentumi nyɛ adwuma.”—Yohane 9:4.
4-6. (a) Adɛn nti na ɛyɛ yɛn dɛ sɛ Noa ne Mose yɛɛ adwuma a Yehowa de hyɛɛ wɔn nsa no? (b) Sɛ Onyankopɔn de adwuma hyɛ nnipa nsa a, nneɛma mmienu bɛn na ɛfi mu ba?
4 Bere tenten ansa na Yesu reba asase so no, Yehowa de nnwuma titiriw bi hyɛɛ nnipa nsa. Ɛwom, Adam ne Hawa anwie wɔn adwuma no, nanso nnipa pii wiee adwuma a Onyankopɔn de hyɛɛ wɔn nsa no. (Genesis 1:28) Yɛnhwɛ obi te sɛ Noa. Yehowa kae sɛ ɔnyɛ adaka na ɔne n’abusua anya nkwa wɔ nsuyiri no mu. Yehowa kyerɛɛ no ɔkwan pɔtee a ɔbɛfa so ayɛ adaka no. Noa yɛɛ nea Yehowa kae no pɛpɛɛpɛ. Wo deɛ hwɛ, sɛ ɛnyɛ osetie a Noa yɛe a anka nnɛ yɛnte nkwa mu.—Genesis 6:14-16, 22; 2 Petro 2:5.
5 Mose nso ɛ? Yehowa kyerɛɛ no ɔkwan pɔtee a ɔbɛfa so asi ntamadan no na wahyehyɛ asɔfodwuma no. Mose yɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ no nyinaa pɛpɛɛpɛ. (Exodus 39:32; 40:12-16) Ɛnnɛ mpo Mose adwumaden ne osetie a ɔyɛe no so wɔ mfaso ma yɛn. Ɔkwan bɛn so? Ɔsomafo Paulo ma yɛhu sɛ na ntamadan no ne asɔfodi no gyina hɔ ma “nnepa a ɛbɛba.”—Hebrifo 9:1-5, 9; 10:1.
Adwuma biara a Yehowa de ahyɛ yɛn nsa no, yɛyɛ de hyɛ no anuonyam
6 Onyankopɔn de nnwuma ahorow hyɛ n’asomfo nsa na ama n’atirimpɔw abam. Ɛwɔ hɔ a, nnwuma a ɛhyɛ ebinom nsa bɛtumi asesa, nanso ne nyinaa hyɛ Yehowa anuonyam na nnipa nya so mfaso. Bere a Yesu wɔ soro ne bere a ɔwɔ asase so nyinaa, adwuma a ɔyɛe hyɛɛ Yehowa anuonyam na ɛboaa nnipa. (Yohane 4:34; 17:4) Ɛnnɛ nso, adwuma biara a Yehowa de ama yɛn no, yɛyɛ de hyɛ no anuonyam. (Mateo 5:16; monkenkan 1 Korintofo 15:58.) Adɛn nti na yɛka saa?
FA ANIGYE YƐ ADWUMA BIARA A ƐHYƐ WO NSA
7, 8. (a) Nnwuma bɛn na Kristofo reyɛ nnɛ? (b) Sɛ Yehowa de akwankyerɛ bi ma a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
7 Ɛyɛ nidi kɛse sɛ Yehowa ama nnipa a yɛnyɛ pɛ ne no abom reyɛ adwuma. (1 Korintofo 3:9) Kristofo bi anya hokwan resisi adan sɛnea Noa ne Mose yɛe no. Ebinom boa ma wɔsisi Nhyiam Asa, Ahenni Asa, ne Betel adan ahorow. Ebia woreboa asiesie Ahenni Asa bi a asɛe anaa woka wɔn a wɔresi Yehowa Adansefo adwumayɛbea ti wɔ Warwick, New York, no ho. (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no. Wɔsi Warwick dan no wie a, saa na ɛbɛyɛ.) Hokwan biara a woanya no, ma w’ani nnye! Eyi nyinaa yɛ ɔsom kronn. Sɛ yɛbɛka a, nnipa kakra bi na wɔboa si dan ankasa, nanso Kristofo nyinaa resi dan foforo bi. Ɛyɛ honhom fam dan anaa asɛnka adwuma no. Eyi yɛ adwuma a ɛhyɛ Yehowa anuonyam na ɛboa nnipa. (Asomafo Nnwuma 13:47-49) Onyankopɔn ahyehyɛde no na ɛkyerɛ sɛnea ɛsɛ sɛ asɛnka adwuma no kɔ so. Enti ɛtɔ da a ebia yɛn adwuma bɛsesa.
8 Yehowa asomfo anokwafo ayɛ krado sɛ akwankyerɛ biara a ɔde bɛma no wɔbɛdi so. (Monkenkan Hebrifo 13:7, 17.) Sɛ yɛn nsa ka dwumadi foforo anaa wɔde akwankyerɛ bi ma yɛn a, ebia yɛrente biribiara ase nwie, nanso yɛgye tom efisɛ yɛnim sɛ ɛfi Yehowa hɔ na nsakrae a ɛte saa de biribi pa bɛba.
9. Nhwɛso pa bɛn na mpanyimfo yɛ ma asafo no?
9 Asafo mu mpanyimfo ntoto wɔn adwuma ase wɔ asafo no mu. Wɔboa anuanom ma wɔdi akwankyerɛ akyi. Eyi nyinaa kyerɛ sɛ mpanyimfo no ankasa ani gye ho sɛ wɔbɛyɛ Yehowa apɛde. (2 Korintofo 1:24; 1 Tesalonikafo 5:12, 13) Akwankyerɛ biara a ahyehyɛde no de bɛma no, mpanyimfo no yere wɔn ho sɛ wɔde bɛyɛ adwuma. Enti sɛ asafo no kyerɛ akwan foforo a yɛmfa so nyɛ asɛnka adwuma no a, mpanyimfo bɔ mmɔden sɛ wɔbɛsua no ntɛm. Wɔyɛ nhyehyɛe ma anuanom di adanse wɔ abɔnten so, tɛlɛfon so, anaa suhyɛn gyinabea. Ebia mfiase no mpanyimfo bi twentwɛn wɔn nan ase sɛ wɔbɛyɛ saa, nanso ankyɛ koraa na wɔhuu sɛ ɛresow aba. Ɛho nhwɛso ni: Akwampaefo baanan bi a wɔwɔ Germany yɛɛ asɛnka adwuma no wɔ baabi a nnwuma ahorow wɔ. Ná ɛyɛ asasesin a wɔyɛɛ mu adwuma akyɛ paa. Wɔn mu baako de Michael, na ɔkae sɛ ehu kaa wɔn efisɛ na ɛhɔ nyɛ baabi a wɔtaa ka asɛm no. Ɔde kaa ho sɛ: “Megye di sɛ Yehowa huu yɛn haw, efisɛ ɔmaa asɛnka adwuma no yɛɛ dɛ paa saa anɔpa no. Eyi yɛ biribi a yɛn werɛ remfi da. Ɛyɛ yɛn dɛ sɛ yɛde akwankyerɛ a ɛwɔ Yɛn Ahenni Som mu no yɛɛ adwuma na yɛde yɛn ho too Yehowa so!” Wo nso ɛ? Wobɔ mmɔden sɛ wobɛsɔ akwan foforo a yɛfa so di adanse no ahwɛ?
10. Nsakrae bɛn na ahyehyɛde no ayɛ nnansa yi?
10 Ɛtɔ da a wɔyɛ nsakrae wɔ Betel nso. Nnansa yi Yehowa ahyehyɛde no akeka Betel ahorow bi abom. Wɔama wɔn a wɔyɛ adwuma wɔ Betel nketewa bi no akɔka Betel akɛse bi ho. Eyi nti na ɛhia sɛ anuanom a wɔyɛ adwuma wɔ Betel ahorow bi no yɛ nsakrae pii. Nanso akyiri yi wɔhuu mfaso a ɛwɔ so. (Ɔsɛnkafo 7:8) Yɛn nuanom yi ani gye ho sɛ wɔbɛyɛ wɔn fam deɛ ma nsakrae a ɛrekɔ so wɔ Yehowa ahyehyɛde mu no ayɛ yiye!
Wobɔ mmɔden sɛ wobɛsɔ akwan foforo a yɛfa so di adanse no ahwɛ?
11-13. Nsakrae a ahyehyɛde no ayɛ nti, tebea bɛn na anuanom bi afa mu?
11 Sɛ yɛhwɛ nsakrae a yɛn nuanom Betelfo bi ayɛ ne ahobrɛase a wɔada no adi a, yɛbɛtumi asua nneɛma pii afi mu. Wɔn mu bi tenaa Betel mfe pii wɔ wɔn kurom, nanso nsakrae yi nti wɔatu kɔ aman foforo so. Na Rogelio ne ne yere yɛ adwuma wɔ Betel ketewa bi, na wɔde wɔn kɔɔ Mexico. Sɛ wode Betelfo a wɔwɔ Mexico no toto baabi a na wɔwɔ ho a, Mexicofo no dɔɔso sen wɔn bɛyɛ mpɛn 30. Rogelio kae sɛ: “Ade a na ɛyɛ den paa ne sɛ yɛbɛgya yɛn abusuafo ne yɛn nnamfo hɔ.” Onua baako a ɔtu kɔɔ Mexico nso ne Juan. Ɛyɛɛ no sɛ afei na ɔrehyɛ ɔbra ase. Ɔkae sɛ: “Ɛsɛ sɛ menya nnamfo foforo na mesua amammerɛ ne amanne foforo.”
12 Wɔmaa Betelfo pii a wɔwɔ Europa aman bi so tu kɔɔ Germany. Na ɛnyɛ ahogono koraa sɛ wɔbɛtu afi wɔn man mu. Ebinom nso tu fii Switzerland, na wɔhwɛ sɛ wɔregyaw Alp mmepɔw fɛfɛ no hɔ akɔ ɔman foforo so a, na ɛnyɛ mmerɛw. Ná Betel abusua a ɛwɔ Austria no sua enti na wɔnim wɔn ho. Enti bere a wɔde wɔn mu bi kɔkaa Betel abusua kɛse bi ho no, mfiase no na ɛyɛ den ma wɔn.
13 Ɛhia sɛ yɛn nuanom Betelfo a wɔatu kɔ aman foforo so no yɛ nsakrae pii, efisɛ wɔrekɔ ɔman foforo so ne anuanom a wɔnnim wɔn akɔyɛ adwuma. Ebia adwuma a wɔbɛyɛ mpo bɛsesa. Bio, wɔbɛkɔ asafo foforo mu, wɔbɛka asɛm no wɔ asasesin foforo mu, na ebia ɛbɛhia sɛ wɔsua kasa foforo mpo. Nsakrae ahorow yi nna fam, nanso Betelfo pii afa mu. Adɛn nti na wɔayɛ nsakrae a ɛte saa? Yɛbɛtie nea wɔn mu bi wɔ ka.
“Nea na ɛhia ara ne sɛ mɛkae sɛ Yehowa na afrɛ me sɛ menkɔ; mepenee so ntɛm ara”
14, 15. (a) Dɛn na ebinom ayɛ de akyerɛ sɛ wɔn ani sɔ hokwan a wɔanya ne Yehowa reyɛ adwuma no? (b) Dɛn na yɛbɛtumi asua afi wɔn hɔ?
14 Onuawa bi a ɔde Grethel kae sɛ: “Bere a Yehowa asafo no de too m’anim sɛ mentu no, mampopo me ti, efisɛ mehuu sɛ ɛyɛ biribi a mede bɛkyerɛ sɛ ɔdɔ a mewɔ ma Yehowa no kɔ akyiri sen ɔman, ɛdan, anaa hokwan biara ɛhyɛ me nsa.” Onuawa bi a ɔde Dayska nso kae sɛ: “Nea na ɛhia ara ne sɛ mɛkae sɛ Yehowa na afrɛ me sɛ menkɔ; mepenee so ntɛm ara.” André ne Gabriela ka too so sɛ: “Yɛhuu sɛ eyi yɛ hokwan foforo a yɛde bɛsom Yehowa na yɛapia yɛn apɛde ato nkyɛn.” Wɔkae sɛ, sɛ Yehowa ahyehyɛde no de nsakrae bi ba a, ɛsɛ sɛ yɛso mu ntɛm sen sɛ yɛbɛsɔre atia.
Hokwan a ɛsen biara ne sɛ yɛbɛyɛ Yehowa adwuma!
15 Sɛ wɔkeka Betel ahorow bi bom a, wɔma Betelfo bi kɔyɛ akwampae adwuma. Saa na ɛbae bere a wɔkaa Denmark, Norway, ne Sweden Betel boom yɛɛ no Scandinavia baa dwumadibea no. Awarefo bi a wɔn din de Florian ne Anja kae sɛ: “Adwuma no nna fam nanso ɛyɛ anika paa. Yɛn deɛ baabiara a yɛwɔ biara hokwan a yɛanya resom Yehowa no som bo ma yɛn paa. Nokwasɛm ne sɛ yɛanya nhyira pii!” Ɛwom, ebia yɛn mu dodow no ara remfa tebea a ɛte saa mu, nanso yɛbɛtumi asuasua Betelfo yi na yɛayi yɛn yam de Ahenni nneɛma adi kan. (Yesaia 6:8) Baabiara a yɛwɔ biara anaa adwuma biara a ɛhyɛ yɛn nsa no, sɛ yɛn ani sɔ hokwan a yɛanya ne Yehowa reyɛ adwuma no a, ɔno nso bɛhyira yɛn.
KƆ SO ARA NE YEHOWA NYƐ ADWUMA!
16. (a) Dɛn na Galatifo 6:4 ka sɛ yɛnyɛ? (b) Hokwan a ɛsen biara bɛn na yɛbɛtumi anya?
16 Esiane sɛ yɛnyɛ pɛ nti, yɛtaa de yɛn ho toto afoforo ho. Nanso Onyankopɔn Asɛm ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ nea yɛn ara yɛbɛtumi ayɛ. (Monkenkan Galatifo 6:4.) Ɛnyɛ yɛn nyinaa na yɛbɛtumi ayɛ asafo mu mpanyimfo, akwampaefo, asɛmpatrɛwfo, anaa yɛbɛtumi akɔsom wɔ Betel. Ampa, eyi nyinaa yɛ hokwan a yɛn ani sɔ paa, nanso ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ yɛn mu biara wɔ hokwan bi a ɛsõ sen eyinom koraa. Ɛne sɛ yɛbɛka Ahenni ho asɛmpa no na Yehowa abu yɛn sɛ ne mfɛfo adwumayɛfo. Ɛnsɛ sɛ yɛtoto hokwan a ɛte saa ase koraa!
17. Mpɛn dodow a Satan wiase yi wɔ hɔ no, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛgye tom? Nanso adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛpa aba?
17 Ɛkaa yɛn nko a, anka yɛatumi ayɛ pii wɔ Yehowa som mu. Nanso mpɛn dodow a yɛte Satan wiase yi mu deɛ, ɛnyɛ biribiara na yɛbɛtumi ayɛ. Nneɛma bi wɔ hɔ a yɛyɛ ho hwee a ɛrenyɛ yiye. Yɛn mu bi wɔ abusua mu asɛyɛde pii; ebinom nso nni apɔwmuden papa. Nanso ɛnsɛ sɛ yɛpa abaw. Tebea biara a yɛwom no, yɛbɛtumi aka Yehowa din ne n’Ahenni ho asɛm. Asɛm no ara ne sɛ nea yɛbɛtumi ayɛ ama Yehowa biara yɛnyɛ, na yɛmmɔ mpae sɛ ɔmmoa wɔn a wɔbɛtumi ayɛ pii asen yɛn. Kae sɛ obiara a ɔbɔ Yehowa din no som bo wɔ n’ani so!
Kae sɛ obiara a ɔbɔ Yehowa din no som bo wɔ n’ani so
18. Dɛn na yɛbɛtumi ahwɛ kwan daakye? Hokwan kɛse bɛn na yɛwɔ seesei?
18 Yɛn sintɔ ne yɛn mmerɛwyɛ nyinaa akyi no, Yehowa ama yɛanya hokwan sɛ yɛnyɛ ne mfɛfo adwumayɛfo. Hwɛ akwannya nwonwaso a ɛyɛ sɛ yɛne Onyankopɔn bɛyɛ adwuma wɔ nna a edi akyiri yi mu! Yɛhwɛ kwan sɛ daakye yɛn nsa bɛka “nkwa ankasa,” kyerɛ sɛ daa nkwa. Ɛrenkyɛ Yehowa bɛma yɛanya anigye ne asomdwoe wɔ wiase foforo no mu afebɔɔ. Saa bere no na yɛbɛte asetena mu dɛ ankasa.—1 Timoteo 6:18, 19.
W’ani sɔ hokwan a woanya no? (Hwɛ nkyekyɛm 16-18)
19. Dɛn na Yehowa ahyɛ bɔ sɛ ɔde bɛma yɛn daakye?
19 Seesei yɛgyina Onyankopɔn wiase foforo no aboboano pɛɛ. Enti momma yɛnkae asɛm a Mose ka kyerɛɛ Israelfo no bere a aka kakraa bi ma wɔakɔ Bɔhyɛ Asase no so no. Ɔkae sɛ: “Yehowa wo Nyankopɔn behyira wo nsa ano adwuma ma abu so, na wo yafunum aba bɛdɔɔso.” (Deuteronomium 30:9) Harmagedon akyi no, Yehowa bɛdi ne bɔhyɛ so de asase no ama wɔn a wɔne no reyɛ adwuma no. Saa bere no ɔde adwuma foforo bɛhyɛ yɛn nsa; yɛbɛma asase mũ no nyinaa adan paradise fɛfɛɛfɛ!
Hokwan: Biribi a Yehowa de adom yɛn; ɛnyɛ biribi a yɛn ankasa atumi ayɛ. Sɛ yɛde Yehowa som di kan na yɛde nneɛma bɔ afɔre a, ɛkyerɛ sɛ yɛn ani sɔ hokwan a yɛanya no
“Mobɛyɛ Asɔfo Ahemman”
‘Fa W’adwene Si Nneɛma a Ɛwɔ Soro So’
ASETENAM NSƐM Nneɛma Titiriw a Akɔ So Wɔ Ahenni Adwuma no Mu
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2014
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2014
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2014